It is me. Ko Niknayman.: တန်ဆောင်မုန်း လပြည့် သာမညဖလ အခါတော်နေ့ သစ္စာပြု ဆုတောင်း။
ကျွန်တော်၊ ကျွန်မတို့သည် စစ်မှန်သော ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓ သာသနာ တော်ကို ယုံကြည်အားထား ကိုးကွယ်ပြီး ဘေး တကာ ဘေးတွင် ဆိုးဝါး ကြောက်မက်ဖွယ် အကောင်းဆုံး သံသရာဘေးမှ ကင်းဝေးရာမှန် မြတ်နိဗ္ဗာန် ကို ဧကန် ထုတ်ချောက် ပို့ဆောင် ပေးနိုင်ရာ နည်းကောင်း လမ်းမှန်ကို ညွှန်ပြသည့် ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓ သာသနာ ကို အရှည် တည်တံ့ သန့်ရှင်း စေလိုသော စိတ်ဆန္ဒ ဧကန် ရှိကြပါသည်။ ဤမှန်သော သစ္စာ စကား ကြောင့် ဗုဒ္ဓ မြတ်စွာ ဘုရားရဲ့ ထေရ၀ါဒ သာသနာ သန့်ရှင်း တည်တံ့ပါစေသော်… သာသနာဖျက် များရဲ့ ဘေးရန်မှ ကင်းလွတ် ပါစေသော်… ဗုဒ္ဓ သာသနာ တော်ရဲ့ စစ်မှန်မှု၊ နှောင်းလူများ သာသနာ အပေါ်မှာ မှားမှား ယွင်းယွင်းမပြုစိမ့် သောငှာ သာသနာဖျက် တို့ရဲ့ သွားရာလမ်းကို သိသာ ထင်ရှားစွာ မျက်မြင် ဒိဌ ပြပါစေ သော်ဝ်..
အကြင်လောကတွင် သာသနာတော်ကို စောင့်ရှောက်သော နတ်မြတ် နတ်ကောင်း နတ် ဘီလူး အပေါင်း တို့သည်လည်း ရှိကုန်ဧ။်။ ဟေမာဝတ နတ်ဘီလူး မင်းသည် လည်းကောင်း၊ အာဠာဝက နတ်ဘီလူး မင်း သည်လည်းကောင်း ထိုမှတပါး များစွာသော သာသနာတော်ကို လေးမြတ် ရိုသေသော မြတ်စွာဘုရားဧ။် တပည့် သာဝကနတ်ဘီလူး အပေါင်း တို့သည် ရှိကုန်ဧ။်။ ထို တပည့် သာဝကများသည် မြတ်စွာ ဘုရားဧ။် ဓာတ်တော် များကိုဌာပနာသော ဓာတု စေတီကို ကိုးကွယ်လျက် ရှိကြ ကုန်ဧ။်။ မြတ်စွာဘုရားဧ၊၊် သက်မဲ့ ဓမ္မ စေတီများ ဖြစ်ကြကုန်သော ပိဋကတ် ကျမ်းစာ တရားတော် များနှင့် သက်ရှိ ဓမ္မ စေတီများ ဖြစ်ကြ ကုန်သော ထို တရားတော် များကို နှုတ်တက် အာဂုံ ရွတ်ဆိုရင်း ရေးသား ဖြန့်ဝေရင်း သာသနာ ပြုလျက် ရှိကြ ကုန်သော ရဟန်း သံဃာ တို့သည် ရှိဧ။်။ ဤ သစ္စာ စကားတို့သည် မှန်ကန်ပါသည်။ သည်မှန်သော သစ္စာ စကားကြောင့် အသင် သာဝက နတ်ဘီလူး မင်း များသည် မြတ်စွာဘုရားဧ။် ဓမ္မ စေတီတော် များကို စောင့်ရှောက် ကြပါစေ သတည်း။ ထို ဓမ္မ စေတီ များနှင့် ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓ သာသနာ တော်ကြီး ပျက်စီးမည့် ဘေးမှ ကာကွယ် ရင်း ကုသိုလ် ယူကြ ပါစေ သတည်း။
အကြင်လောကတွင် သာသနာတော်ကို စောင့်ရှောက်သော နဂါးမင်း အပေါင်းတို့ သည် ရှိကုန်ဧ။်။ ကာလ နဂါးမင်းသည် လည်းကောင်း၊ နန္ဒောပ နန္ဒ နဂါး မင်းသည် လည်းကောင်း၊ ထိုမှတပါး မြတ်စွာဘုရားဧ။် အံတော် တစ်ဆူကို နဂါးပြည်တွင် စေတီ တည်ထား ကိုးကွယ်သော နဂါးမင်း တို့သည် လည်းကောင်း၊ ဗုဒ္ဓ မြတ်စွာဘုရားဧ။် တပည့် သာဝကများ ဖြစ်ကြ ပေသည်။ ထို တပည့် သာဝကများသည် မြတ်စွာ ဘုရားဧ။် ဓာတ်တော် များကို ဌာပနာသော ဓာတု စေတီကို ကိုးကွယ်လျက် ရှိကြ ကုန်ဧ။်။ မြတ်စွာဘုရားဧ၊၊် သက်မဲ့ ဓမ္မ စေတီများ ဖြစ်ကြ ကုန်သော ပိဋကတ်ကျမ်းစာ တရားတော် များနှင့် သက်ရှိ ဓမ္မ စေတီများ ဖြစ်ကြ ကုန်သော ထို တရားတော် များကို နှုတ်တက် အာဂုံရွတ်ဆိုရင်း ရေးသား ဖြန့်ဝေရင်း သာသနာ ပြုလျက် ရှိကြ ကုန်သော ရဟန်း သံဃာ တို့သည် ရှိဧ။်။ ဤသစ္စာစကားတို့သည် မှန်ကန်ပါသည်။ သည်မှန်သော သစ္စာ စကားကြောင့် အသင် သာဝက နဂါးမင်း များသည်မြတ်စွာဘုရားဧ။် ဓမ္မ စေတီတော် များကို စောင့်ရှောက် ကြပါစေ သတည်း။ ထို ဓမ္မ စေတီ များနှင့် ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓသာသနာ တော်ကြီး ပျက်စီးမည့် ဘေးမှ ကာကွယ် ရင်း ကုသိုလ် ယူကြ ပါစေ သတည်း။
Posted by Ko Niknayman at 4:44 PM